१४ वर्षीय बालकले १२ वर्षीया बालिकालाई गर्भवती बनाएपछि…
टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार युवकको मृत्यु
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका– १० जनागालस्थि अरनिको राजमार्गमा आज बिहान टिपर र बोलेरोले मोटरसाइकल च्यापिँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै अर्का एक गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रङ्गीन जादू: ‘ओइ ! ऊ त्यहाँ हेर् त कति राम्रो हाम्रो…’
“ओइ ! ऊ त्यहाँ हेर् त कति राम्रो हाम्रो घुम्ती बजार”, एकले भने । “हो त नि है, हेर न ऊ त्यो कालिकास्थान पनि आम्मा..म्मा ! गणेश हिमाल त झन्
प्रेमिकालाई नाङ्गै बनाएर भिडियाे, माेटाे रकममा बार्गेनिङ
काठमाडाैं । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङले मोटरसाईकलमा सवार एक युवा र युवतीलाई बन्धक बनाई तथा अपहरण गरि अश्लिल भिडियो बनाई पैसा माग्ने युवाहरुलाई पक्राउ गरेको छ । तुलसीपुर उपमहागरपालिका
क्यानडाको भिसा पाउन के गर्नुपर्छ ? (पुरै प्रक्रियासहित)
काठमाडाैं । नेपालीहरुका लागि क्यानडा पनि सपनाको संसार भन्दा कम्ता छैन । काम गर्न, पढ्न तथा घुम्नका लागि क्यानडामा वर्षेनी विश्वका लाखौं मानिस जान्छन् । तर नेपालीहरुका लागि क्यानडा जान
डुङ्ग्रीको रुख २०० नम्बरको सीमा स्तम्भ, अनुगमन गर्नै मुश्किल
भीमदत्तनगर । भारतसँग सीमा जोडिएको वडा हो, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका-९ बिचफाँटा। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष चुनिनुभएका नारायणप्रसाद जैशीले गाउँ छेउमै रहेको प्यारातालपारि (भारततर्फको) मुख्य सीमा स्तम्भ नं १९५ अवलोकन गर्न
डोजर प्रकरणः छानबिन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएन
यही कात्तिक ४ गते बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकमा डोजरले महिला हुत्याएपछि गठन भएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको छ । छानबिन समितिको थपिएको म्याद सकिएको पनि एक हप्ता बितिसक्दासमेत
जाजरकोट । यहाँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१५ किलोमिटर सडक नयाँ ट्र्याक खोलेको बताएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहले २१५ किमी सडकको
बहुविवाह मुद्दामा फरार एक व्यक्ति पक्राउ
सिरहा । बहुविवाह मुद्दामा अदालतबाट कैद सजाय पाएर फरार रहेका एक युवकलाई गएराति सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बहुविवाह मुद्दामा जिल्ला अदालत सिरहाबाट ११ महिना २० दिनको कैद सजाय
प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित सिरहा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागुऔषधसहित सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका– १ कचनारीबाट मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– ७ निवासी १८ वर्षीय रोशन खड्का, सोही ठाउँका ३० वर्षीय गोविन्द नेपाल